Soomaaliya oo si adag uga hadashay warka Safiirka Mareykanka ee Kenya ka baahiyey Dacwadda Badda. - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada Soomaaliya oo si adag uga hadashay warka Safiirka Mareykanka ee Kenya ka...
Safiirka dawladda Soomaaliya u jooga dalka Kenya Amb. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa si adag u beeniyey warka Safiirka dawladda Mareykanka u jooga Kenya uu daaha ka rogay ee kusaabsan in ay USA doonayso in wada hadal ay la gasho SOomaaliya, sidaas oo kalena kulan qarsoodi ah ay Muqdisho kula yeesheen Madaxweyne Farmaajo oo ay isku afgarteen dib u dhigida dacwadda Badda.
Safiirka Soomaaliya ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin warka ay sheegtay dawladad Kenya, gaar ahaana warbaahinta Kenya ayuu sheegay in ay ficiladaas ay qaaday yihiin kuwa been abuur ah.
Xukuumadda Faderaalka ma bixin faahfaahin dheeraad ah oo arrimahan ku saabsan, xili ay madax badan dalbanayaan in la cadeeyo mawqifka dawladda Faderaalka Soomaaliya ee dhacdadan ku wajahan.
“Ummadda Soomaaliyeed waxaan wargalinaynaa inuusan dhicin kulan dhexmaray Madaxweyne Farmaajo iyo Safiirka Mareykanka ee Kenya xilligii uu booqashada ku yimid Muqdisho oo ahayd dhawr bilood kahor”ayuu yiri Amb. Tarsan.
Mucaaradka oo uu hogaaminayo Madaxweynihii dacwadda Badda geeyey ICJ, Xassan Sheekh Maxamuud ayaa cod dheel ku dalbaday in ay Xukuumadda Faderaalku faahfaahin ka bixiso arrimaha dacwadda Badda ee socda.
Jawaabta kooban ee dawladda Soomaaliya, waxay ku soo beegmaysaa xili tan iyo shalay si weyn loo baahiyey macluumaadka ku saabsan wargeys kasoo baxa dalka Kenya oo qoray in safiirka USA u jooga Kenya uu cadeeyey in ay arrimahan si cad ugu sheegeen Madaxweyne Farmaajo.